साम्राज्ञीलाई १६ लाख ! - मनोरञ्जन - नेपाल
साम्राज्ञीलाई १६ लाख !
साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह अभिनीत पछिल्लो फिल्म इन्टु मिन्टु लन्डनमा हिट भयो तर जस अभिनेता धीरज मगरले पाए । हलमा धीरजकै क्रेज हाबी देखियो । मिडियामा पनि धीरजले नै तारिफ बटुले । इन्टु मिन्टु लन्डनमा अगाडि साम्राज्ञी अभिनीत कायरा र तिमीसँगले बक्स अफिसमा खराब प्रदर्शन गरेका थिए । यसरी हेर्दा उनको व्यावसायिक ‘ट्रयाक रेकर्ड’ सुखद छैन । तैपनि, उनलाई महँगो पारिश्रमिकमा फिल्म खेलाउन निर्माताबीच तँछाडमछाड छ । त्यसैको प्रमाण हो, पुनम क्षत्री गौतमको नयाँ फिल्ममा साम्राज्ञीले १६ लाख रुपैयाँ पाउनु । नवल नेपालले निर्देशन गर्ने उक्त फिल्ममा साम्राज्ञी औपचारिक रुपमा अनुबन्ध भएकी हुन् । यसअगाडि नेपाली फिल्मवृत्तमा कुनै हिरोइनले यति महँगो पारिश्रमिक लिएका थिएनन् । अनि त, साम्राज्ञीको शान नचुलियोस् पनि कसरी !